July 2020 – Cele MM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပြီး အူဝဲလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုး ခေါ်ရတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေတစ်ဖက်နဲ့ ကလေး နှစ်ယောက် ကို အချိန်ပေးနေရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ ခုတလော အူဝဲတစ်ယောက် ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေလို့ ပရိသတ်တွေက သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေက ပုံတွေတင်ပါဦးလို့ တောင်းဆိုနေကြတာပါ ။ ဒီနေ့မှာတော့ အူဝဲက ဟိတ်! ယူ
မေပန်းချီကတော့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ရရှိထားတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းအပြည့်နဲ့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုရလာသူဖြစ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ မရိုးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စပွန်ဆာယူလေ့ရှိကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ” တချို့တွေကျတော့ အနုပညာကိုခုတုံးလုပ်ပြီး စပွန်ဆာနဲ့ကမ္ဘာပတ်နေသူတွေရှိသလို အခုချိန်ထိယက်ကန်ယက်ကန်ကြိုးစားနေသူတွေလည်း ရှိကြတယ်.. ဒါကတော့ စကားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုကတည်းက သူတို့လည်းအပြင်မှာမြင်ဖူးဆုံဖူး တွေ့ဖူးနေကြလို့ ဒီဟာက ဖြစ်လာတာပေါ့နော်.. ဒါကြီးကို မရှိပါဘူး
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် တန်ခွန်ကျော်ကတော့ မနေ့က ဇူလိုင်လ (၂၀)ရက်နေ့မှာ အလှူလေးတစ်ခုကို ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့ တန်ဂိုလေးတွေနဲ့ အတူတူ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူလေးဖြစ်ပြီး စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ YGW မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ တန်ခွန်ကျော်ကတော့ တန်ဂိုလေးတွေနဲ့ အတူတူ အလှူလေးတွေကို တောက်လျှောက်ဆိုသလို ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတစ်ခေါက် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ YGW မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့စေသူထဲမှာတော့ အိမ့်ချစ်လည်း အပါအဝင်ပါ။ အိမ့်ချစ်ကတော့ မကြာသေးခင်ကလက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ချစ်အတွက်လည်း အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကို အဆက်မပြတ်ဖန်တီးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ “နှမြောတယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်း မမေ့လျော့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ့်ချစ်ကတော့ ဘုရားမှာ ရွှေဆွဲကြိုးနှစ်ကုံးမြောက်လှူဒါန်းလိုက်ရတဲ့အတွက် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို “ရွှေဆွဲကြိုးလေးထပ်တူ နှစ်ကုံးရှိပြီလှူခွင့်ရတာ” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ My Story မှာ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ
နေခြည်ဦးကတော့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်၊ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့အပြုအမူလေးတွေလုပ်လေ့ရှိတာပါ။ နေခြည်ကတော့ ဟန်ဆောင်မှုမရှိဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုနေထိုင်တတ်တာကြောင့်လည်း ဝေဖန်မှုတွေရှိသလိုချစ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နေခြည်ကတော့ အခုလည်း ရယ်မောစရာဟာသတွေကို လုပ်ပြလိုက်ပြန်ပါပြီ။ နေခြည်ကတော့ နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အလုပ်တွေမအားလပ်အောင်ရှိနေတတ်ပေမဲ့ Tik Tok လေးတွေလည်း မကြာခဏဆိုသလို ဆော့လေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလည်း အပြင်ထွက်တဲ့အခါရေမွှေးဆွတ်တဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေခွီရအောင်လို့ ဟာသတွေလုပ်ကာ Tik Tok တွေဆော့ထားပြန်ပါပြီ။
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေး သက်မွန်မြင့်ကတော့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပေမယ့် လုံးဝမလျော့သွားတဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေချပြနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆီမတက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အပြင် ကလေးယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာအရည်အသွေးတွေနဲ့ တောက်ပတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်စဲသူတစ်ယောက်ပါ။ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ရပ်တည်မှုနှစ်ခုကြားဘက်မျှနေဖို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ချစ်သက်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်တွေရပ်နားထားတဲ့ကာလမှာ ကလေးတွေအတွက်ပိုအချိန်ပေးဖြစ်နေပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သားလေးနဲ့ သမီးလေးအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုလည်း မျှဝေပေးနေသူပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်၊ အလုပ်တွေပြန်စတော့မှာမို့ တွေ့ဖို့အချိန်နည်းလာတဲ့အကြောင်းကို
ပရိသတ်ကြီးရေ ဆုအိမ့်စံကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုအိမ့်စံကတော့ လတ်တလောမှာ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ဆီကနေ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး လက်ဆောင်လေးကို ဆုအိမ့်စံက သဘောကျနှစ်သက်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ဆောင်ရရှိတဲ့အကြောင်းကို “မွေးနေ့ကတည်းက လက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့ ပရိသတ်မောင်လေးတယောက် ရောဂါတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်နေတော့ လက်ဆောင်ခုမှရောက်တယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် ” လို့ ဆုအိမ်စံကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ လက်ဆောင်ရတဲ့ နာရီပုံလေးနဲ့ အတူ မျှဝေဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တောင်တက်ရင်း ဝက်ဝံကြီးတစ်ကောင် အနားကပ်လာပြီး မခွာတော့တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့အဖြစ်
ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တုန်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Rex Chapman ရဲ့ Twitter ကနေပြီး ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်တက်တုန်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ သူ့အတွက် ထူးဆန်းလွန်းလို့ သဘောကျပြီး တင်ခဲ့တာပါတဲ့။ ဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ဟာ မက္ကဆီကိုမှာ တောင်တက်ခရီးစဉ်တစ်ခုကို သွားခဲ့ပါတယ်။ San Pedro Garza Garcia မှာရှိနေတဲ့ Chipinque Ecological ဥယျာဉ်ထဲမှာပေါ့။
တစ်ချိန်တုန်းက အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ လှအဉ္ဇလီတင့်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေအမှတ်ရနေကြမှာပါနော်။ အနုပညာလောကနဲ့ အလှမ်းဝေးနေခဲ့တာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင် ပရိသတ်ရှေ့ကပျောက်နေခဲ့တာမို့ အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ လှအဉ္ဇလီတင့်တစ်ယောက် ဘာတွေလုပ်နေသလဲ သိချင်နေကြမှာအမှန်ပါ။ လှအဉ္ဇလီတင့်ကတော့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် တနေ့တာအကြောင်းအရာနဲ့ အလှူအတန်းပုံရိပ်လေးတွေ မျှဝေလေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ဘဲ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ သိချင်နေကြမယ့်ပရိသတ်ကြီးအတွက် လတ်တလောသူ့ရဲ့ဘဝရပ်တည်မှုပုံစံကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” FB.
လတ်တလော ပရိသတ်တွေ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ ဂျီဟောသူ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးက တော့ ဆရာမ မစန္ဒာရဲ့ ဂျီဟောသူ ဝတ္ထုကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရိုက်ကူးသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ ရဲ့ သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ် နဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါ ။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲက အနေအေးတဲ့ ဗိသုကာ မေဂျာက ခင်ချိုအဖြစ်